Moments Neshamwari 22
Munhu anogona kutarisa mukati memuviri wake oona kushanda kwezvikamu zvakasiyana, uye kana zvakadaro sei izvi zvingaitwa sei?
Mumwe anogona kutarisa mukati memuviri wake uye akaona imomo nhengo dzakasiyana mukuvhiya. Izvi zvinoitwa nechavo chekuona, asi kwete kuona icho chinogumira pazvinhu zvemuviri. Iro ziso rakadzidziswa kuona zvinhu zvepanyama. Iro ziso harizonyore kutenderera pazasi kana pamusoro peiyo octave yemuviri, uye pfungwa saka hazvigone kududzira zvine hungwaru izvo izvo ziso risingakwanise kuendesa kwariri. Iko kune vibrations iyo iri pasi peiyo octave yemuviri, uye zvakare vamwe pamusoro payo. Kurekodha izvi zvinodzika ziso rinofanira kudzidziswa. Izvo zvinokwanisika kudzidzisa ziso kuti rirekodhe zvinhu zvisingaonekwe nepo zvinoonekwa Asi imwe nzira inodikanwa kuitira kuti munhu aone nhengo sechinhu chomukati mukati memuviri wake. Iyo ficha yemukati panzvimbo yekuona kwekunze inofanirwa kuvandudzwa. Kune mumwe asina chipo nehunyanzvi hwakadai hunofanirwa kutanga nekukudziridza hunyanzvi hwekutarisira, iko kuita kwepfungwa. Nekuvandudzika kwekufungisisa kunogadziriswazve simba rekuongorora. Nekudzidziswa uku pfungwa dzinozvisiyanisa pachavo kubva kune nhengo dzadzinenge dzichikurudzirwa. Gare gare, pfungwa dzinokwanisa kuwana nhengo mupfungwa uye, nekuisa pfungwa pamusoro payo, kunzwa yayo pulsations. Kuwedzerwa kwepfungwa yekunzwa kunetseka kwepfungwa kunogonesa pfungwa kuti inyatsonzwisisa uye nekuvandudza iwo maonero epfungwa ane chekuita neiyo nhengo. Pakutanga iyo nhengo haina kuoneka, sezvakaita zvinhu zvepanyama, asi zviri pamwe kubata kwepfungwa. Gare gare, zvisinei, iyo nhengo inogona kuve yakanyatso zivikanwa sechinhu chero chemuviri. Chiedza icho chinowonekwa hachisi chekuvhenekera kwechiedza, asi panzvimbo pacho mwenje unopihwa nepfungwa pachawo uye unokandirwa pachinhu chiri kuongorora. Kunyangwe iyo nhengo inoonekwa uye basa rayo richinzwisiswa nepfungwa, ichi hachisi chekuona kwemuviri. Neichi chinoonekwa chomukati nhengo inonzwisiswa zvakajeka uye inonzwisiswa zvakanyanya kupfuura zvinhu zvemuviri zvinowanzove.
Pane imwe nzira yekuona nhengo mumuviri wemunhu, iyo isiri, zvisinei, yakasvika nenzira yekudzidziswa kwepfungwa. Iyi imwe nzira ndiyo kosi yekuvandudzwa kwepfungwa. Izvo zvinounzwa nekushandura munhu kuziva kwake kubva mumuviri wake kuenda kumweya wake wepfungwa. Kana izvi zvaitwa, kuona kwechisero kana clairvoyant kunova kunoshanda, uye mune iyi nyaya iyo muviri wemuastral unowanzobva pane wepanyama kwenguva pfupi kana kuti wakasununguka pamwe nayo. Mune mamiriro aya nhengo yemuviri inoonekwa mune yayo yakafanana neyemukati medumbu mumuviri wemu astral kunge munhu anotarisa mugirazi haaone kumeso kwake asi iwo anoratidza kana chiso chake. Izvi zvinofanirwa kutorwa nenzira yemifananidzo, nekuti imwe yemuviri muviri ndeyekuumbwa kwemuviri wenyama, uye nhengo imwe neimwe mumuviri ine mufananidzo wayo munyama yemuviri. Kufamba kwega kwega kwemuviri wemuviri chiito kana maitiro kana kutaura kwemuviri wemuviri we astral; chimiro chemuviri wenyama chinoratidzwa zvechokwadi mumuviri we astral. Naizvozvo, munhu anogona mudunhu rekuona akaona muviri wake wemuralral, ari munyama anogona kuona muviri wake uye mune iyo mamiriro anozogona kuona nhengo dzese mukati uye pasina muviri wake, nekuti iyo faculty ye astral kana ichokwadi clairvoyant chiono hachiganhurwe kunze kwekunze kwezvinhu sezvazviri enyama.
Kune nzira dzakawanda dzekugadzira iwo clairvoyant fakisi, asi imwe chete inokurudzirwa kune vanoverenga
Iyi nzira ndeyekuti pfungwa dzinofanira kutanga dzigadziriswe. Mushure mekunge pfungwa dzava danho, iyo clairvoyant fakitori icha, kana ichidikanwa, ichauya sezvairi semaruva emuti mumatsutso. Kana maruva akamanikidzwa nguva yavo isati yakakodzera, chando chichavauraya, hapana chibereko chinotevera, uye kazhinji muti wacho unofa. Iyo clairvoyant kana humwe hutano hwepfungwa hunogona kuwanikwa pfungwa dzisati dzasvika mukusimba uye iri tenzi wemuviri, asi izvo zvichange zvisingashandise sezvazvinogona kuita manzwi eidi. Hafu yakagadziriswa clairvoyant haizive kushandisa kwavo nehungwaru, uye ivo vangave nzira yekukonzera kushungurudzika kwepfungwa.
Imwe yedzakawanda nzira dzekusimudzira pfungwa kuita basa remunhu uchifara uye kusatenda. Uku ndiko kutanga uye ndizvo zvese zvinogona kuitwa pakutanga. Ichawanikwa kana ikaedzwa, iyo nzira yebasa ndiyo nzira yekuziva. Sezvo munhu anoita basa rake anowana ruzivo, uye asunungurwe kubva pakuda kwebasa irori. Basa rega rega rinotungamira kune rakakwira basa uye mabasa ese akaitwa zvakanaka anoguma mukuziva.